Nchegbu: Ihe kpatara ntutu dị nro | Etu Ntutu Eke & Ntutu isi
Nchegbu na-emetụta usoro okirikiri ntutu anyị nkịtị Nke kwesịrị onye ọ bụla na -eri ntutu isi 100 kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị elele ọnụ ọgụgụ ahụ na ntutu ole dị na isi mmadụ (~ 150,000) a dịghị ahụcha ntutu ndị ahụ karịsịa ebe ọ bụ na anyị na-emepụta ntutu dị ka akụkụ nke okirikiri ntutu. Ntutu uto nke ntutu
Ihe isi ike na-emetụta usoro uto ntutu isi anyị
Ndi mmadu kwesiri ka aturu isi 100 na ubochi obula. Ọ bụrụ na anyị elele ọnụ ọgụgụ ahụ na ntutu ole dị na isi mmadụ (~ 150,000) a dịghị ahụcha ntutu ndị ahụ karịsịa ebe ọ bụ na anyị na-emepụta ntutu dị ka akụkụ nke okirikiri ntutu.
Oge irighiri isi nke ntutu bụ mgbe ntutu bidoro ma n'otu oge kwesakwa itolite, ma mgbe ụfọdụ ma ọ ga-emecha daba.
Ntọala mmepe, nke sayensi mara dịka “anagen” nke ntutu isi mmadụ nwere ike iru afọ abụọ na isii. N’oge a, ntutu nwere ike ịga n’ihu itolite ruo mgbe kachasị ruo afọ isii ebe ntutu gị ga-emesị pụta. Akụkụ dị iche iche nke isi anyị na ntutu isi anyị nwekwara ndụ dị iche iche. Mgbe agbasara na isi gị niile, ụfọdụ ntutu ga-adị ogologo karịa ndị ọzọ mana n'oge oge ọ bụla ọnụ ọgụgụ ntutu isi na-etolite etolite dị 150,000. Mgbe anagen gasịrị (ntutu bidoro), ntutu na-abanye n'okwu sayensị nke a na-akpọ "catagen", nke bụ mgbe ntutu isi bidoro ịbọnye oge dị mkpụmkpụ nke ga-adị naanị ụbọchị atọ. Ihe na-adọrọ mmasị mgbe usoro catagen na-abịa bụ "telogen", nke bụ mgbe isi na-agba nkịtị ma ọ nweghị ihe ọ bụla. Ma na, n'ikpeazụ, “exogen” bụ okwu sayensị mgbe ọ dara.
Ntutu ntutu dị mkpụmkpụ n'ihi nrụgide
Echere na nchekasị na-emetụta usoro uto nke ntutu a, na-akpata balding n'ihi mgbanwe nke oge etiti na usoro mmepe (“anagen”). N'adịghị ka ntutu na-eto n'oge a na-eto eto ntutu, nrụgide yiri ka ọ na-agwụ ntutu isi na-eme ka ụfọdụ ntutu malite ịbanye na usoro izu ike ("catagen"). N'otu oge, ntutu ndị a na-agbada n'otu oge na ntutu ndị ọzọ na-eme ka ntutu gị na-ete.
Ntutu ntutu maka ụmụ nwanyị
A na-ahụkarị ịkwafu Mass mgbe ụmụ nwanyị mụsịrị nwa. Mgbanwe anụ ahụ na homonụ na-emetụta usoro uto ntutu oge niile ma nwee ike ibute ntutu dị omimi nke ụmụ nwanyị. Ihu ntutu na-ete mgbe a tụsịrị ime ga-emekwa n'ihi ihe mgbanwe na homonụ nke na-agbanwe usoro okirikiri ntutu kwesịrị. A maara nke a dị ka “Telogen Effluvium” ma na - abụkarị na ụmụ nwanyị n'ihi mgbanwe nke homonụ nke na-eme ka ntutu isi gbanwee.
Telogen Effluvium abụghị naanị mgbanwe nke homonụ na-emetụta ya na enwere ike inwe ọtụtụ ihe na-akpata mmetụta na-emetụta usoro uto nke ntutu isi, ihe ndị a gụnyere: Nsogbu oke, oke ibu, ọgwụ na nri na-adịghị mma na-akpata ntutu isi.
Ihe ọ bụla nke nwere ike ime ka ahụ nwee echiche na-adịghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ gbanwee ọ bụ ụzọ arụ ọrụ nkịtị nwere ike kp ụ isi ntutu.
N’imeso telogen effluvium na-adaberekarị na nke kpebisiri ike na-akpaghasị usoro uto ntutu gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ bụ nrụgide, jiri ụzọ iji zuru ike ma tụgharịa uche. Y’oburu n’ibu ibu n’ile anya na ị na eri nri obula kwesiri inye gi aru. Were gabazie.
ntutu isi nwanyintutu isinchegbunrụgide na - akpata ntutu isintutu na-ete isitelogen effluvium